Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga XFS oo soo dhaweysay wafdi ka socda dalka Qadar | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga XFS oo soo dhaweysay wafdi...
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Qorsheynta iyo Maalgashiga XFS oo soo dhaweysay wafdi ka socda dalka Qadar
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Qorsheynta iyo maalgashiga XFS ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, ku soo dhaweeysay wafdi ganacsato ah oo ka socday dowladda Qatar.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Qorsheynta iyo maalgashiga xildhibaan Fahmo Axmed Nuur oo warbaahinta Qaranka kula hadashay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kaddib marki ay soo dhaweysay ganacsatadaasi ayaa sheegtay in ganacsatada ka socota dalka Qatar ay dalka u yimaadeen sidii ay fursado maalgashi uga heli lahaayeen dalkeenna.
Wasiirka oo hadalkeeda sii wadata ayaa xustay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay dadaal dheeraad ah ku bixineyso sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka.
iyadoo intaasi ku dartay in dowladdu ay dhameystirtay shuruucda asalka u ah maalgashiga dalka.
Wafdika oo iyagane la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsanyihiin iney soo booqdaan dalka Soomaaliya ayna ku soo dhaweeyaan mas’uuliyiinta dowladda, Iyagoo sheegay iney dalka u yimaadeen sidii ay uga heli lahaayeen fursado maalgashi.
Wafdigan ganacsatada ah oo ka socda dalka Qatar ayaa inta uu joogo dalka waxa uu la kulmi doonaa, wasaaradaha ka shaqeeya wax soo saarka iyo rugta ganacsiga iyagoo u kuurgelidoona fursadaha maalgashi ee uga bannaan dalka.
Previous articleWafti uu Hogaaminaayo wasiirka waxbarashada XFS oo Kormeerey iskuulka 15 Maay
Next articleCiidamada Police-ka Soomaaliyeed oo soo qabtey rag lagu edeyey in ay ka ganacsadaan waxyaabaha maanka dooriya